Dhawunirodha Pamusoro pe100 Infographic Matemplate e $ 59 | Martech Zone
Dhawunirodha Anopfuura zana Infographic Matemplate e $ 100
Muvhuro, Mbudzi 18, 2013 Mugovera, October 20, 2018 Douglas Karr
Kwete akawandisa makambani anogona kuwana izere dhizaini uye yekusimudzira zano re infographics. Mapakeji edu anosvika mumutengo asi kazhinji anotanga pamadhora mazana maviri nemazana mashanu ekutsvagisa, dhizaini uye kusimudzira kwepakutanga infographic. Ehe, izvo zviri kure kwazvo kunze kwebhajeti yemakambani mazhinji. Uye makambani ane vagadziri haakwanise kuita kuti vashande kwemazuva pane infographic mazano! Muchokwadi, isu takaona kuti data visualization ndeye yakasarudzika tarenda isingawanikwe mune ese dhizaini.
Asi… kana iwe uine dhizaini uye ungade kuburitsa infographic yakapihwa mamwe ma templates, mukomana kune vatinoshanda navo paInfographic.li vane chinoshamisa dhiri. Kwe $ 59 US, unogona dhawunirodha pamusoro makumi matatu nematanhatu maratidziro mune 35 matemplate akasiyana! Ive neshuwa yekushandisa yedu yakabatana chinongedzo kuchengetedza tani pane ino yekupa!
Tenga Mifananidzo Yako Yemifananidzo Zvino!
Iwo mafaera anowanikwa mu Photoshop (PSD), Illustrator (AI), Encapsulated PostScript (EPS) uye Jpeg (JPG) mafomati! Heino muenzaniso mumwe chete kuti iwe ugone kuona mhando uye nguva iyo yapinda mune izvi:
Tags: kurodha infographicsinfograph matemplate infographicsinfographicinfographic epsinfographic illustratorinfographic psdinfographic templeKushambadzira Infographics
GoSquared: Real-Nguva Analytics uye Dhata